Akụkọ - akpa vetikal enyi na enyi na igbe
Taa, anyị ga-achọ ikwurịta ihe ọhụrụ eco-friendly bag-in-igbe (cheertainer-zuru okè nnọchi nke cubitainer). Anyị na-akpọkarị ya aakpa-n'ime igbe kwụ ọtọ, n'ihi na e jiri ya tụnyere omenala ohiri isi-ụdị akpa-in-igbe, ọ nwere ike idowe a akụkụ atọ square n'ime katọn na n'ụzọ zuru okè dabara na katọn, si otú ibelata mmebi nke nkukota na esemokwu n'oge njem. Na-ebelata nke ukwuu ohere nke ntapu mmiri dị iche iche.
N'ezie, nke a ụdị eco-enyi na enyi obi ụtọ (akpa-na-igbe, Ndochi zuru oke nke cubitainer) bụ ihe a ma ama na Japan, South Korea na mba Europe na America, a na-ejikwa ya na ahụike, kemịkalụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ nri. N'ebe a, anyị chọrọ ichetara nke ọma na ebe ọ bụ na nje Covid-19, akụ na ụba ụwa emebiwo nke ukwuu, ma n'otu oge ahụ, ọnụ ahịa ibu oke osimiri na ikuku ebiliwo nke ukwuu, arịa na oghere mbupu siri ike ide akwụkwọ, ọtụtụ. ndị na-azụ ahịa na-eche echiche maka otu esi ebelata ụgwọ, chekwaa ibu na ụgwọ nchekwa. Na nke a, anyị vetikal akpa-na-igbe (cheertainer- zuru oke nnọchi nke cubitainer) bụ ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ na-akwado. Mgbe ndị ahịa na-ahọrọ akpa anyị vetikal (cheertainer-zuru okè nnọchi nke cubitainer), ha na-ahọrọ ịchekwa ego na nchekwa gburugburu ebe obibi. Nhọrọ dị otú ahụ nke iji otu nkume gbuo nnụnụ abụọ bụ ihe amamihe dị na ya.
Site na 3L ruo 50L nkọwapụta, anyị na-akwado nhazi ndị ahịa. N'otu oge ahụ, anyị atọ akụkụ akpa-na-igbe enwere ike ibipụta ya. Ọ bụrụ na izipu akara ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ihe osise ọhaneze, anyị nwere ike ibipụta ya na akpa ngwaahịa dịka achọrọ.
N'oge a siri ike COVID-19, anyị nwetara ọtụtụ iwu maka mmiri na-efe efe. Ndị ahịa na-ahọrọ ngwaahịa anyị, tụkwasị obi n'ịdị mma anyị, ma n'ikpeazụ kwado ọrụ anyị. Mgbalị anyị na-eto ndị ahịa, anyị enwetawokwa nzaghachi dị mma. Nke a bụ ebumnuche anyị. Enwere m olile anya na anyị na ndị ahịa anyị niile ga-etokọ ọnụ maka uru otu na nsonaazụ mmeri.
Oge nzipu: Ọgọst-19-2021